Ao Rosia Misy Fonja Mamokatra Lahatsary Malaza Be Miparitaka Amin’ny YouTube · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Marsa 2016 12:38 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Español, Français, 日本語, English
Raha vao misaina ireo fonja Rosiana ianao, tsy hahazo sary an-tsaina ny fanaovana hetsika tselatra amin'ny mozika na famokarana sarimihetsika tsy matianina, nefa izany no natolotry ny fonjam-panjakana laharana faha-7 tao Omsk, izay niarahan'ny tale lefitry ny fonja, i Andrei Zyuzko, manana famoronana manokana, nanangana tarika niaraka tamin'ny andian'ireo voafonja mba hamokatra ireo lahatsary malaza be ao amin'ny YouTube.
Iray amin'ireo lahatsary voalohany nalaza be novokarin'ny tao amin'ny fonja tao anaty YouTube ilay hetsika tselatra tamin'ny 9 May 2015, fankalazàna ny Andron'ny Fandresena, rehefa mankalaza ny nandresen'i Firaisana Sovietika an'i Alemaina Nazi i Rosia. Tao amin'io lahatsary io, izay ankehitriny ahitàna mpijery maherin'ny 9.000 ao amin'ny tambajotra, voafonja anjatony no manao dihy mirindra anaty fiarahana tonga lafatra, mijanona hanonona ireo teny “fandresena 70 [taona].”
Ny volana manaraka, nanjohy ireo Rosiana an'arivony tamin'ny fahatsiarovana an'i Viktor Tsoi ny fonja, iray amin'ireo mpanao hira rock ankafizina indrindra tany URSS, izay tamin'io ny tsingerintaona faha-53 taonany. Niara-nanao diabe mirindra indray ireo mpifonja, namakiana ireo teny “miaina i Tsoi lives” tamin'io fotoana io. Tarika iray amin'ireo mpifonja ihany koa no miantsehatra ny iray amin'ireo hiran'i Tsoi. Amin'ny fotoana iray manokana ao anatin'ilay lahatsary, mandohalika avokoa ny tsirairay, mampibaribary ireo mpikambana rehetra ao amin'ny tarika. Kelikely avy eo, mitsangana indray ireo mpifonja, manakona ireo mpitsoka mozika any aorian'ny vahoaka. Tena santionana firindràna kely nefa mahafinaritra io. Nahazo mpitsidika maherin'ny 3.500 io lahatsary io.
Ny tena nampalaza indrindra ny fonja hatreto dia lahatsary iray maharitra efatra minitra narafitra haka ny endriky ny “Yeralash“, seho iray ao amin'ny fahitalavitra misy fampihomehezana mampahatsiahy andiany iray amin'ny tantara Benny Hill taloha. Ny hetsika fohy nataon'ny fonjan'i Omsk dia manasongadina fanafihana tselatra nataon'ny mpifonja iray tamin'ireo mpiara-mifonja aminy tamin'ny bolongan-dranomandry, mandrapahitan'ireo telo niharam-boina noho ny nataony azy ka namaliany faty azy araka ny tokony ho izy. Vita tanteraka ny valifatin'izy ireo rehefa voahidy ara-bakiteny tao anaty sariolona vita tamin'ny ranomandry ilay ranamana. Nahazoana mpijery maherin'ny 241.100 tao amin'ny YouTube io asakanto io.
Toy ny loharanom-pitokisana ny laza tahàka izany, satria ny tolotra farany nataon'ny fonja, notontosaina tamin'ny 2 Martsa 2016, dia horonantsary fohy 17 minitra momba ireo voafonja telo namoaka mpahay majika avy tao anaty zinga fasiana dite, izay manatanteraka faniriana iray isanisany ho azy ireo. Ny lehilahy roa voalohany mitaky sakafo (ny iray mahazo hena baolina ary sushi ny an'ilay iray), raha toa ilay iray fahatelo manao hira rap, mangataka sambokely iray sy ankizivavy tsara tarehy iray.
Andrei Zyuzko, izay manara-maso ny asa fanabeazana ireo voafonja, no atidoha nikotrika ireo ezaka famokarana sarimihetsika ireo, na dia nanomboka nilalao ny andraikiny ihany aza ireo voafonja teo amin'ny fizotry ny fandrafetana. (Araka ny voalazan'ny birao mpiserasera amin'ny gazety ao amin'ny fonja, Zyuzko irery ihany no nanampy tamin'ny fanoratàna ilay tantara amin'ny sarimihetsika misy ilay olona mahatalanjona, ny ankamaroan'ireo asa dia vokatra avy amin'ireo voafonja izay nilalao tao anaty lahatsary.)
Raha inoana ireo famoaham-baovaon'ny fonja, mety ho afaka hanatanteraka zavatra mahafinaritra ao Omsk i Zyuzko, hampandray anjara ireo olona mifotetaka aorian'ireo fefy vy ary handrisika azy ireo hiara-hiasa anaty famoronana. (ianaran'izy ireo ihany koa ireo traikefa tena ilaina betsaka amin'ny famokarana horonantsary sy fanambàrana lahatsary mahaliana, na izany aza mety hijanona tsy hahazoana tombontsoa ny “talentan'izy ireo” mikasika ny fanoratana tantara.)